Ego Asia: Yen na Shekels | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | Atụmatụ
A ka nwere ogologo oge tupu ụwa ejiri otu ego, n'ụdị ihe nkiri sayensị akụkọ ifo nke na-ekwu maka ụwa jikọrọ ọnụ n'okpuru otu usoro ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ego, na-enweghị ihe mgbochi ọchịchị. Nke ahụ ọ ga-eme?
Ka ọ dịgodị na ọbụlagodi ụfọdụ mgbanwe ma ọ bụ ahịa ndị nkịtị, a ka nwere ọtụtụ ego. Taa, anyị ga-ekwu okwu yen na shekel, ego ndi Japan na Israel.
1 Japanese nke yen
Japanese nke yen
Ọ bụ ego mba Japan na otu n’ime ego kachasị mkpa n’ụwa. Okwu ahụ, ọ bụrụ na anyị atụgharịa ya n'ụzọ nkịtị, pụtara gburugburu o gburugburu ọ dịkwa ka ego izizi nke sitere n’ichepụta ihe ahụ dị na Mexico bụ peso.
Yen ẹkenam n'oge Mweghachi Meiji, oge nke akụkọ ntolite Japan nke na-egosi njedebe nke ọchịchị na nlọghachi na ndụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke eze ukwu mgbe narị afọ ole na ole nke ndị isi kachasị ike nke Japan ochie kpuchiri.
Mweghachi Meiji pụtakwara ime ka obodo ahụ dị ọhụrụ, nke a na-ahụkarị na fim ahụ Ikpeazụ eh starring Tom Cruise na-enwe na guzobe a oge a European-ịke steeti.
N'ime afọ ndị a nke mgbanwe miri emi maka ọha mmadụ Japan bụ mgbe yen bia ebe a dochie Sọlọmọn, akwụkwọ ego nke oge gara aga, oge Edo.
Ejiri iwu kwadoro dị ka ego mba site na ọrụ nke 1871 ma ọ dị mkpa maka mba ahụ ịbanye na usoro ọgbara ọhụrụ nke n'oge ahụ metụtara Kpụrụ ọlaedo.
Kedu ihe bụ Gold Gold? Ego mba ọ bụla ewepụtara nwere nke ha nkwado ọla edo ma nke a bụ eziokwu kemgbe obere oge, ọ bụ ezie na n'oge a na-adịghịzi ele parity anya. Eziokwu bụ na site na mgbe ahụ yen yen banyere egwuregwu nke ego sistemụ ego na n'ezie, mgbanwe niile na usoro ego emetụtala ya kemgbe 1871 dị anya ruo ugbu a.
Ọ dị mma mkpụrụ ego ahụ bụ 1, 5, 10, 50, 100 na 500 y ụgwọ yen 1, 2, 5 na 10. A na-eji mkpụrụ ego eme ihe n'ọtụtụ ebe na ndị Japan na-achọkarị akaụntụ.
Ọ bụ mba ebe ego, ego nkịtị, yabụ ezie na kaadị kredit dị ma na-aga n'ihu na-aga n'ihu, ụlọ ahịa, nnukwu ụlọ ahịa na ebe gastronomic ga-ahọrọkarị ego siri ike na ngwa ngwa. Buru nke a n'uche ma ọ bụrụ na ị na-eche maka ịga Japan.
Ọ bụ aha Akkadian ma ọ bụ Hibru oge ochie mana nwere mgbọrọgwụ na Sumeria oge ochie. N'oge ahụ dị anya ọnụ ahịa ya kpọmkwem na ibu ọka witYa mere, a na-agbakọ na otu shekel na ihe dị ka gram 180 nke ọka wit, ma ọ bụ ihe na-erughị. Anyị na-ekwu maka puku afọ abụọ na narị ise tupu Kraịst, iji nweta otu echiche.
E nwere ọtụtụ obodo na-eji aha na ego a eme ihe kama ịbụ ndị metụtara ịdị arọ ọka wit, ha emetụla nke ọla edo na ọla ọcha. Taa mba nke nọgidere na-eji shekel eme ihe bụ Israel. Ebe aha nwere nnukwu ibu na bụ akara maka mba.
Israel nwere ọtụtụ ego n'ogologo akụkọ ntolite ya dị ka obodo: Gerah Kurus, Akce, paụnd Palestian, shekel na shekel tupu nke ugbu a. El shekel, shekel ma ọ bụ shekel bụ ego nke Israel kemgbe 1980 ma dochie egwu Israel.
Afọ ise ka nke a gasịrị, ndị ọzọ nọchiri ya Nuevo Shekel, na mkpụrụ ego na akwụkwọ ego, n'ezie, na ebumnuche nke ịtụte na ịzụlite akụ na ụba Israel. Ẹbahade shekel kiet ke 100 agoroth (agora na otu).
Enwere ederede nke shekel 20, 50, 100 na 200 na mkpụrụ ego 10, 5 na shekel 1 na 50, 10 na 5 agoroth. Ana m agwa gị na ọ bụrụ na ị na-eche maka ileta Israel ị nwere ike ịbanye mba ahụ na ego mba ọzọ wee mee mgbanwe kwekọrọ na akụ, ụlọ mgbanwe, ụlọ oriri na nkwari na ọfịs na mba ahụ.
N'ezie, site na weebụsaịtị ndị njem na mba ha na-adụ ọdụ debe dollar ole na ole ma ọ bụ euro n'ihi na enwere saịtị ndị njem nleta na-anabata ego mba ọzọ ozugbo.
Ọzọkwa, ọ bụrụ na ịgagharịla, ịmara na ịkwesighi ịgbanwe ego niile n'otu oge mana obere obere, iji rite uru ọnụego mgbanwe wee ghara ịla ego penny. Na Israel kwa ị nwere ike ịdọrọ ego n'ụlọ akụ ọ bụrụ na ha anabata kaadị akwụmụgwọ mba gị.
Ma n'ezie, ọ bụrụ na ị debere ụfọdụ shekel ma ị nọ na Ben Gurion International Airport ị nwere ike ịgbanwe ha ọzọ. A nabatara mgbanwe mgbanwe ego ruru US $ 500 ma ọ bụ otu ya na ego ndị ọzọ.
Y ọ bụrụ na ego gị bụ euro ị nọ na chi n'ihi na agbanyeghị na shekel ọhụrụ bụ ego nyere ohere ka uto akụ na ụba Israel, ọ bụghị na ọkwa euro ka ị nwere uru.
N'ikpeazụ, Ọ bụrụ na ị bụ onye Spen, edobela shekel n'ihi na na Spen ị gaghị enwe ike ịgbanwe ego Ya mere ahapụla Israel n’enweghị agbanwe ihe niile.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » Atụmatụ » Ego Asia: Yen na Shekels
Otu esi achọta ụgbọ elu dị ọnụ ala: aghụghọ 5